Asa 1 - Ny Baiboly
Asa toko 1
Sasin-teny - Fara-fihaonan'ny Tompo tamin'ny Apostoly - Ny niakarany any an-danitra - Ny nifidianana olona hisolo an'i Jodasy.
1Ry Teofily, efa voalazako tamin'ny boky voalohany ny zavatra rehetra nataon'i Jesoa sy nampianariny, 2hatramin'ny andro nampakarana azy, nony efa nomeny ny didiny tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ny Apostoly izay nofidiny. 3Taorian'ny nijaliany, dia maro ny porofo nentiny nanamarina tamin'izy ireo fa velona tokoa izy, sady niseho taminy nandritra ny efa-polo andro izy, ary nilazalaza ny momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'izy ireo.
4Ary ilay niaraka tamin'izy ireo iny izy, dia nanafatra azy mba tsy hiala ao Jerosalema, fa hiandry izay nampanantenain'ny Ray, araka ny efa renareo tamin'ny vavako, hoy izy. 5Fa Joany nanao batemy tamin'ny rano, ary hianareo kosa hatao batemy amin'ny Fanahy Masina, raha afaka andro vitsivitsy. 6Ka izay tafangona teo dia nanontany azy hoe: Tompoko, amin'izay va no fotoana hanangananao ny fanjakan'Israely indray? 7Fa hoy ny navaliny azy ireo: Tsy anareo ny mahalala ny andro na fotoana izay efa nalahatry ny Ray amin'ny fahefany. 8Fa rahefa hidinan'ny Fanahy Masina hianareo dia hahazo hery, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodea ary Samaria ka hatrany amin'ny fara vazan-tany.
9Nony efa nilaza izany izy, dia nakarina teo anatrehan'izy ireo; ary nisy rahona nanakona azy, ka tsy hitan'ny masony intsony izy. 10Raha mbola nibanjina ny lanitra teo izy ireo, tamin'i Jesoa nisondrotra nisondrotra ihany, dia indreo nisy roa lahy niakanjo fotsy niseho teo anilany, 11nanao hoe: Ry lehilahy avy any Galilea, nahoana hianareo no mijanona eto mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nalaina taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra.
12Tamin'izay izy ireo dia niverina tany Jerosalema, avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay làlana azo aleha sabata raha eo Jerosalema. 13Nony tonga dia niakatra tao amin'ilay rihana fitoerany izy ireo, dia Piera sy Joany, Jakoba sy Andre, Filipo sy Tomà, Bartelemy sy Matio, Jakoba zanak'i Alfe sy Simona Zeloty, ary Joda rahalahin'i Jakoba. 14Niray saina izy rehetra, ary naharitra nivavaka niaraka tamin'ny vehivavy sasany, sy Maria renin'i Jesoa, ary ny rahalahiny.
15Tamin'izany andro izany dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Piera (tokony ho roapolo amby zato ny isan'izy nivory teo) ka nanao hoe: 16Ry rahalahy, tsy maintsy tanteraka ilay Soratra voalazan'ny Fanahy Masina tamin'ny vavan'i Davida momba an'i Jodasy, izay nitarika ny mpisambotra an'i Jesoa; 17fa anisantsika ihany koa izy, sady nanana anjara tamin'izao fandraharahantsika izao. 18Nefa nahazo saha tamin'ny tambin'ny otany iny lehilahy iny, ary lavo nihohoka izy ka vaky ny kibony, sady niparitaka ny tsinainy. 19Zavatra fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany, ka io saha io dia nahazo anarana tamin'ny fiteniny hoe Haseldamà, izany hoe sahan-drà. 20Ary izany indrindra no voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe: Aoka ho lao ny fonenany, ka tsy honenan'olona akory; ary koa: Aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. 21Koa amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika tamin'ny andro rehetra nitoeran'i Jesoa Tompo teto amintsika, 22hatramin'ny nanaovan'i Joany batemy azy ka hatramin'ny andro niakarany any an-danitra, dia aoka hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelon'ny nitsanganany tamin'ny maty.
23Dia nanokana roa lahy tamin'izy ireo izy, dia Josefa atao hoe Barsabasy sy nampiana anarana hoe Ilay Marina, ary Matiasy, 24ka nivavaka nanao hoe: Tompo ô, hianao no mahalala ny fon'ny olona rehetra, ka asehoy izay voafidinao amin'izy roa lahy ireto, 25mba hanana anjara amin'izao fandraharahan'ny Apostoly izao, izay nialan'i Jodasy hankanesany any amin'ny fitoerany. 26Dia nanaovany loka izy roa lahy, ary Matiasy no nahazo ny loka, ka izy no lany ho isan'ny Apostoly roa ambin'ny folo lahy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0829 seconds